Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 01
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 01
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 01
Evangeri raRuka rinotidzidzisa pamusoro paJesu ari munhu.
Izvi zvinowedzerwa nezvakabuda pasarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016: tarisirai zvisingatarisiriki.
Munhu aive asingatarisirwi anodaidzwa kuti “The Trump” akakunda zvinoshamisa munhu aidiwa kwazvo uye aitarisirwa nevazhinji Hillary Clinton. Hillary aive nemari yekushandisa yakawanda zvakapetwa kagumi kumukunda uye aive nerutsigiro rwakazara kubva kubato rake nevamwe vatungamiri varo vose. Trump aizvidzwa nevenhu uye nevakuru vaibata naye mubato rake. Nekukunda musarudzo, Trump akakonzeresa kuzunzwa kukuru pasi rese.
Saka chii chiri kuedza kuziviswa kwatiri naMwari? Chiratidzo chenguva chipi chatiri kuratidzwa?
Imwe hwamanda (trump) ichatumira zvakare kuzunzwa kukuru pasi rese.
I VATESARONIKA 4:16 Nokuti Ishe amene achaburuka kubva kudenga nokudanidzira, nenzwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari: vakafa munaMwari vachatanga kumuka.
“Hwamanda” (The Trump) yakataurwa ichiyananiswa nenguva yerumuko apo maKristu akafa kubva mumakore 2 000 enhorondo yekereke anomutswa. Mumashure maizvozvo maKristu mapenyu vanoshandurwa vopiwa miviri mitsva isingavori isingabatwe nesimba rekuwira pasi vokwanisa kukwira kudenga kunosangana naJesu mumakore. MaKristu nhasi uno anowisirwa pasi nezvitendero zvavasingakwanisi kutsigira neBhaibheri. Vashoma kwazvo vanotenda zvinotaura Bhaibheri. Uye vanozvidzwa nekushorwa nekuda kwekuita izvozvo. Kukwira kudenga hazvisi zvinhu zvinojairika nesu vanhu venyama, saka vashoma kwazvo pakati pedu vachakwanisa kuita izvi.
I VAKORINTE 15:52 Pakerepo, nokubwaira kweziso, nehwamanda (trump) yekupedzisira; nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nokusavora; nesu tichashandurwa.
Kumuka kwevakafa nekushandurwa kwemiviri yevapenyu ndizvo zviitiko zviviri zvekupedzisira Ishe Jesu asati auya.
“Kudanidzira” imharidzo yakaita seyaJohane Mubapatidzi yekutizunza nekutimutsa kuti tibude mutsika dzemasangano uye dzechinyakare nedzidziso dzevanhu yotiita kuti titevere Magwaro mune zvese zvatinotenda.
Mutumwa mukuru ndiye mutumwa wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10 anouya panyika achisvikoshandisa “inzwi” rake rine simba kumutsa vakafa kubva panyika nemugungwa mavakavigwa.
Zvino “hwamanda” (the trump) ichave panguva yekushandurwa kwemiviri apo “hwamanda” inotidaidza kudenga kunosangana naJesu paanoburuka nemakore.
Hwamanda muMagwaro yaive yambiro inotaura hondo.
I VAKORINTE 14:8 Nokuti kana hwamanda isingariri kwazvo, ndiyaniko ungazvigadzira kundorwa?
Hondo yemweya. Makereke anoparidza zvimwe zvichibva muBhaibheri zvimwe zvichibva padzidziso uye tsika dzevanhu. Uku hakusi kurira kwakanaka. Tinofanira kuva tichitevera magwaro zvakazara.
Rumuko rusati rwaitika uye hwamanda isati yarira, Mwari anotumira chiratidzo chatinoziva sesarudzo dzekuAmerica, kuti atiswededze padyo uye kuti atiyambire kuti Kuuya Kwake kweChipiri kwaswedera.
Saka ndiyani achange akagadzirira Kuuya kweChipiri kwaJesu? Havasi vazhinji.
RUKA 18:8 … Asi Mwanakomana wemunhu kana uchisvika uchawana kutenda panyika here?
Vanodiwa kwazvo vane mbiri vakagarika mumakereke avo vacharasikirwa uye vaya vanoonekwa sevasina tariro uye vanozvidzwa vakarambwa “vanonzi vapanduki” (kana vanhu vakaipa) vasingawirirane nezvinoitwa mumakereke vachakunda, zvichashamisa nekukatyamadza vanhu vose. Vanonzi vazivi mumakereke vakatadza kuziva zvaizobuda musarudzo dzekuAmerica.
Kufunga kwaMwari kwakasiyana kwazvo nekufunga kwevanhu.
Chinhu ichi chingagoneka here?
Hongu. Jesu akatiyambira kuti izvi zvichaitika.
MATEO 22:2 Vushe bwokudenga bwungafananidzwa nomumwe mambo, wakaitira mwanakomana wake mutambo wokuwana;
3 akatuma varanda vake kunodana avo vakanga vakokerwa kumutambo wokuwana; vakaramba kuvuya.
Mwari anotanga kudaidza maKristu akaponeswa kumutambo wekuwana. Vanosarudzwa pekutanga. Asi havadi havo. Vanoda makereke avo anemagarikwa uye dzidziso dzemakereke avo dzine mbiri netsika dzavo. Vanoda korona pasina kutakura muchinjikwa. Havagari nezvinotaurwa neBhaibheri chete, sezvo vanoti ndezvakare uye hazvina maturo.
MATEO 22:4 Akatumazve vamwe varanda akati; Vudzai vakakokerwa muti; Tarirai ndagadzira chisvusvuro changu, nzombe dzangu nezvakakora zvangu zvabaiwa, zvinhu zvose zvagadzirwa; vuyai kumutambo wokuwana.
5 Asi havana kurangarira, vakaenda mumwe kumunda wake, umwe kukutengesa kwake.
6 Vamwe vakabata varanda vake vakavaitira zvakaipa, vakavavuraya.
MaKristu haafariri kutsigira kutenda kwavo neBhaibheri. Magwaro ese avasinganzwisisi anosiiwa kana kurerutswa achinzi “haana kukosha”. MaKristu anovenga munhu wese anovaudza kuti vanokanganisa kukereke kwavo. Vhesi remuBhaibheri rese rinorwisa dzidziso dzavo rinosiiwa kunge risipo. Vanhu vanoedza kuvagadzirisa vanosvibiswa hunhu hwavo. Chikwata chekereke chega chega chinozviti chinonatsa. Kugarika mudzidziso dzakaipa kwabata hushe mumakereke. Nhasi uno chikwangwani chiri pamisiwo yemakereke chakanzi “Tapota musatikanganise, kana kuti ...”
MATEO 22:8 Zvino mambo akati kuvaranda vake; Mutambo wekuwana wakagadzirwa, asi vakanga vakokerwa vakanga vasina kufanirwa. (MaKristu akaponeswa vanosarudza chichechichechi, maKristu akaponeswa akakomborerwa nebudiriro nepfuma, maKristu akaponeswa vakakosha vane mbiri, vakuru vemakereke.)
MATEO 22:9 Naizvozvo endai kumharadzano dzenzira, mukokere kumutambo vose vamunowana. (vapanduki, zvirema varombo).
MATEO 22:10 Varanda ivavo vakabudira kunzira, vakavunganidza vose vavakawana, vakaipa (saTrump) nevakanaka, (saPence zita rake rinoreva kuva murombo pachinzimbo chekuva mupfumi. MaPaundi mashirini nemaPenzi) imba yokuwana ikazara nevagere pakudya.
Saka Evangeri raRuka rinotitaurira zvatisingadi kunzwa.
Tinofanira kushanduka kana tichida kuva takagadzirira Kuuya kwaShe. Kuuya Kwake kuchasiyana nezvatinofungira kana zvatakatarisira.
MuTestamente Itsva, Mwari ane zvipenyu zvina kana zvikara zvinorarama zvakapoteredza chigaro chake cheHushe zvinomira sevarindi veMuviri wake, unova kereka.
VAEFESO 5:23 Nokuti murume musoro womukadzi, saKristu vo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuviri.
24 Asi kereke sezvairi pasi paKristu,
Muviri wevatendi vanoponeswa naJusu chete uye vanoramba vari pasi peShoko rake, ndivo vanoita muviri wake wemweya, unozivikanwa sekuti Mukadzi wake kana kuti vasikana vakangwara.
Uyu ndiwo moyo wechiKristu. Tinofanira kuponeswa uye kuteerera kunezvakanyorwa muBhaibheri.
ZVAKAZARURWA 4:6 Pamberi pechigaro chevushe pakanga panegungwa rakavonekera, rakafanana neKristaro; napakati pechigaro chevushe , napamativi ose echigaro chovushe, pakanga panezvisikwa zvina zvipenyu, zvizere nameso mberi neshure kwazvo.
7 Chisikwa chipenyu chokutanga chakanga chakafanana neshumba, chisikwa chipenyu chechipiri chakanga chakafanana nemhuru, chisikwa chipenyu chechitatu chinechiso chakaita sechomunhu, nechisikwa chipenyu chechina chakanga chakafanana negondo rinobhururuka.
Mhuru inzombe duku.
Zvakangooma kutsanangura zviratidzo zvemweya zvekudenga tichishandisa zvinhu zvedu zvepanyika, asi Ezekieri akaonawo chinhu chakafanana neichi kuTestamente Yekare makore 6 00 Bhuku raJohane raZvakazarurwa risati ravapo.
EZEKIERI 1:10 Kana zviri zviso zvazvo pakuonekwa kwazvo, zvaive nechiso chomunhu, zvose zviri zvina zvaive nechiso cheshumba kurutivi rworudyi; zvose zviri zvina zvaive nechiso chenzombe kurutivi rwokuruboshwe; zvose zviri zvina zvaive nechiso chegondo vo.
Gondo rinobhururuka pamusoro pazvo.
MuTestamente Itsva chigaro chaMwari chovushe ndipo paanogara mumoyo yevarume nevakadzi vakazvarwa patsva.
Zvikamu zvina zvemoyo zviratidzo zvezvipenyu zvina zvakapoteredza chigaro chaMwari chevushe.
Mwari akatsanangura kutangwa kwekereke yake (muviri waKristu) muBhuku ramabasa Avapostora.
Kereke yaive iri pakanakisa pamazuva emuTestamente Itsva ipapo, nekukanganisa kwekuzviisa pasi pehutungamiri hwevanhu, yakatanga kurasika munguva yerima.
Ruka ndiro Bhuku rechitatu pamaBhuku mana eEvangeri akapoteredza nekuchengetedza Bhuku “reMabasa eMweya Mutsvene mumapostora ekereke yekutanga”.
Zvakadaro, Ruka rinomiririrawo chipenyu chechitatu chinoonekwa pachigaro chaMwari chevushe, chine chiso sechemunhu.
Saka Ruka anomiririra Kristu seMunhu akarurama uye anotiudzawo isu maKristu kuti tingatenda sei kuti hunhu hwedu hwevanhu uye mabasa edu afadze Mwari okurisa Hushe hwake panyika.
Izvi zvaive zvakadaro chete nekuti Kristu aive pakati pekereke yake achibata pairi, ndizvo zvakaita kuti vagone kuita Bhuku raMabasa.
MaBhuku mana eEvangeri ndiwo moyo weBhaibheri sezvo hupenyu hwedu husingaperi huchibva pahupenyu nechipiriso chaJesu.
Mateo anotaura Kristu ari mambo sezvo shumba iri mambo wemhuka dzose. Mako anomuratidza ari muranda asinganete kana nzombe Ruka anomuratidza ari Munhu akarurama. Johane anotaura kuti Jesu ndiye Mwari anofamba panyika ari mumuvuri wemunhu.
Ropa rake rekutishambidza rakakosha sezvo richitipa hupenyu husingagumi kupfurikidza kutenda muBhuku raMabasa. Izvi zvinoisa hwaro kuti Mwari anodei pakubata kwekereke yake.
MaBhuku mana eEvangeri anotiudza kuti tochengetedza sei ruwadzano rwedu naMwari kuti tirambe tichitungamirwa neMweya Mutsvene uye kuti tisatongwe nekutungamirirwa nevanhu vanotungamira. Satani anoda hutungamiri hwevanhu kuti hugotsiva hutungamiri hweMweya Mutsvene hunotitungamira kunotenda kuShoko raMwari rakanyorwa, Bhaibheri.
Ropa raJesu chete ndiro rinogona kutipa hupenyu husingagumi mukati mevatendi vose munguva nezviitiko zvakasiyana siyana zvaizosangana nekereke mukati memakore 2 000 enhorondo yayo.
Chipenyu chechitatu chinomiririra Evangeri raRuka chaifanirawo kutsanangura maitiro makuru eMweya Mutsvene uchishanda mukereke yaMwari mukati menguva dzeMutsiridzo dzakatanga kubva munana 1517. Mweya waMwari wakakomborera ukashandisa ruzivo rwevanhu uye dzidzo yaMartin Luther kuGermany kudzosera kuti “vatsvene vanorarama nekutenda”. MaKristu aifanira kutendeuka oponeswa pachinzvimbo chekurarama nechinyakare kana nekusaziva. Mwari akabva atanga kuramba achidzosera kereke kuTestamente Itsva nekushandisa ruzivo rwevanhu uye dzidzo yaJohn Wesley kuEngland paaizivisa chokwadi chehutsvene, rudo kuhama uye kuparidzira. Izvi zvakaita nheyo dzenguva huru yemamishinari yaive nguva huru kwazvo yekubata kwevanhu mubasa raMwari, kubva panguva yekereke yekutanga. Izvi zvakapera munana 1906 pakatanga rumutsiridzo rwerubapatidzo rweMweya mutsvene nevePentecostal kuCalifonia kuAmerica.
Nguva iyi yakaona ruzivo rwevanhu nedzidzo zvichiropafadzwa nekuzodzwa naMwari kuti zvibereke kushandurwa kwakanaka kwerurimi rweBhaibheri kubva muchiHeburu nechiGiriki, kuita Bhaibheri reKing James muna 1611.
Iri ndiro rega Bhaibheri risingatongwi nemurairo wekopiraiti. Saka ndiro Shoko raMwari. Mamwe maBhaibheri ese ari pasi pemutemo wekopiraiti kuti uchengetedze maonero emunyori uye kuwana kwake kwaanoita mari. Saka ese ishoko revanhu.
Kutsanangura “chiso sechomunhu” zvinotidzosa “pamusoro”.
Musoro wekereke ndiro rimwe rematambudziko makuru mumakereke.
Bhaibheri reKing James ndiro Shoko raMwari rechokwadi saka ndiro musoro uye tsime redzidziso yechiKristu yechokwadi. Arimo ndiwo mashoko echokwadi akataurwa naMwari.
Saka King James ndiro “Zvanzi naJehova”.
Vasikana vakangwara nemwenje yavo vanovhenekera chiedza chavo paBhaibheri reKing James kuti vaone Shoko rechokwadi, rinova Jesu Kristu. Vanotenda chete zvinotaurwa neBhaibheri.
Imwe sarudzo ndeyekuti munofanira kuita imwe sarudzo pane sarudzo zhinji dzemazana emaBhaibheri aripo akanyorwa nenzira dzakasiyana, ese akasiyana nerimwe zvichiwedzera pamusoro pekuvandudzwa kuri kuramba kuchitwa maBhaibheri.
MuchiKristu chechokwadi, mavhesi eBhaibheri ndiwo anovimbwa kuti ndiwo nheyo dzedzidziso nekuti ndiwo ega anozivisa Jesu Kristu seMusoro wekereke. (Kutenda mune zvimwe zvinhu kunoita mumwe munhuwo zvake musoro wako.) Vatendi vanotenda kuShoko rakanyorwa muBhaibheri chete, ndivo vega vangazvidaidza kuti maKristu.
Havadi rimwe zita nekuti mukadzi anotora zita remurume wake.
VAEFESO 5:23 Nokuti murume musoro womukadzi , saKristu vo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuviri.
VAEFESO 5:24 Asi kereke sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavadaro pazvinhu zvose kuvarume vavo.
Chinhu chikuru chekutanga chakakanganiswa nevamutsiridzi vakuru vaipikisa chiCatholic kwaive kutora maitirwo aiitwa zvinhu mukereke yeRoma ekuva nemunhu pamusoro pekereke. Izvi hazvimo muMagwaro uye zvinobereka “chichechichechi” chemasangano.
Kutevera musoro wemunhu semufundisi, zvinobuditsa dambudziko. Kubva panguva yemutsiridzo, makereke anosvika 30 000 akasiyana emasangano neasiri emasangano akaberekwa. Vanhu vanotungamirira vakaita ndudzi zhinji dzekukanganisa padzidziso. Shoko raMwari rega ndiro ratinofanira kutevera.
“Muchichechichechi” chemasangano vanhu (vakaita samufundisi, mupurista, bhishopu, pope nevamwe vakadaro) ndivo misoro yekereke vanhu vanovatevera vanozvidaidza nemazita emakereke kana mazita evakuru vemakereke avo- sekuti vekwaLuther, maMethodist, vekwaWesley, maBaptist, maPentecosti, veMharidzo, vekwaBranham nemamwe akadaro.
Pakuedza kudzivisa kereke kuti isatevere nzira yemasangano ane misoro mizhinji iyi Ruka akatsanangura Jesu semunhu akarurama watinofanira kutevera.
Iye, Iye ega amene, ndiye kakodzera kuita musoro wekereke nekuti Jesu ega ndiye musoro waMwari watinoona.
Zvakafanana nemutungamiri weAmerica ndiyewo chiso chenyika yeAmerica.
Saka Ruka anotizivisa zvinhu zvakakosha zvatinofanira kurangarira tichirarama sevanhu patinosarudza kutevera munhu akarurama, Jesu Kristu. Ndiye Mwari mumuviri wemunhu.
Ruka anosimbirira pahumunhu hwaKristu, Munhu wenyama.
Evangeri raJohane richatarisa Mwari anogara mumuviri wenyama weMunhu Kristu.
RUKA 1:76 Iwe, Mwana uchanzi muprofita woWokumusoro-soro, nokuti iwe uchatungamira pamberi paShe, kumugadzirira nzira dzake.
Jesu ndiye chiso chaMwari. Saka Ruka akazivisa Jesu semunhu.
Saka mureza waRuka chiso chemunhu. Chiso chaJesu Kristu. Ndiye chiso chaMwari chenyama.
Thus Jesus alone is the Head of the church. All our so-called church leaders can at best be parts of the body of Christ. He is the Head, we are the body. All the parts of the body are controlled by the head. Saka Jesu ega ndiye Musoro wekereke. Vakuru vedu vese vemakereke vangoriwo zvikamu zvemuviri waKristu. Ndiye Musoro, isu tese tiri muviri. Zvikamu zvese zvemuviri zvinotongwa nemusoro.
Saka Jesu Munhu pakati pedu. Zvinoreva kuti Mwari akazvideredza kusvika patiri isu kuti atiratidze kuti tinofanira kufunga sei uye tirarame sei. Sevanhu, hatifaniri kutarisira kuvakuru vedu vemakereke (vangori midziyo inotadza) asi kuna Jesu Kristu semufananidzo mukuru wekuti munhu anofanira kuva akaita sei.
Ruka aive n’anga.
VAKOROSE 4:14 Ruka, n’anga inodikanwa,
N’anga ndiye munhu chaiye anogona kutsanangura munhu. Ruka aidisa vaHedeni nekuti kereke ndiwo muviri waKristu anova iye oga musoro wekereke. Muviri wese wekereke mukati menguva nomwe dzemakereke waive uye unoitwa nevaHedeni.
Saka Mwari akasarudza Ruka aive nemoyo murefu kuvaHedeni kuti anyorere kereke kuvaHedeni. Ruka ndiyewo akanyora Bhuku raMabasa. Chikamu chekupedzisira chebhuku raMabasa chinonyanya kutaura pamusoro paPauro, Muprofita kumaHedeni, paairuka nheyo dzekereke yemaHedeni mukati menzendo dzake dzehushumiri.
Ruka ndiro Bhuku rakarebesa remuTestamente Itsva zvinotaridza nguva refu makore anoda kusvika 2 000, achatorwa nenguva dzemakereke emaHedeni manomwe.
VAGARATIA 2:8 (Nokuti iye wakapa Petro simba rokuva muapostora kunavakadzingiswa [maJuda] ndiye wakapa vo ini [Pauro] simba rokuva muapostora kuvaHedeni:)
Pauro ndiye aive muapostora kuvaHedeni. Ruka aive ndiye mumwe wake akatendeka pavaifamba pakati pevaHedeni. Saka Ruka akagara ari nemoyo werudo kuvaHedeni.
II TIMOTIO 4:11 Ruka oga uneni.
Pauro akapupura kuvimbika kwaRuka kubasa rehushumiri kuvaHedeni.
Kushanda naKristu seMunhu, Ruka akatsanangura kuzvarwa kwaJohane nekwaJesu. Munhu wese anotanga ari mwana. Saka Ruka, sen’anga, akanyora pamusoro pekubata kwemimba nekutakurwa kwemimba dzavo vose vari vaviri.
Vavengi veEvangeri vazhinji vaizogurira panzira hupenyu hwaJohane Mubapatidzi, Jesu nevamwe vakawanda vekereke yekutanga.
Vanhu vakawanda vanofa vasati vachembera vanorarama muzvikamu zvikuru zviviri, chekutanga semwana uye sababa.
Vadzidzi vakakurawo nemuzvikamu zviviri izvi. Sevarume vechidiki, vaive vana vemadzibaba avo echiJuda vaichengeta murairo. Sevana vaida kudzidziswa naJesu. Zvino, mumashure mekubva kwaJesu pakati pavo, vadzidzi vakakura kuva madzibaba ekereke yekutanga yaivaziva sevapostora.
RUKA 1:17 Uchafamba (Johane Mubapatidzi) pamberi pako noMweya nesimba raEria, kuti adzorere moyo yamadzibaba kuvana, navasingatereri bwavakarurama, agadzirire Ishe vanhu vakamugadzirirwa kwazvo.
Kutaura uku kwaive kwekuratidza kuti Johane Mubapatidzi akataurwa pachiporofita chakaitwa naMaraki.
“Moyo” yemadzibaba zvaireva kuti maJuda aive apatsanurana kuita masangano mashanu. Masangano ezvitendero makuru maviri aive vaFarise vaitonga zvaiitika musinagoge, nevaSaddusi vaifambisa zvinhu muTembere. Kwaivewo nevaHerode (vaive munezvematongerwo enyika namambo Herode), vaZiroti (vaive vakasimba parudo rwavo rwekuuraya vavengi vavo), nevaEseni vakazvibvisa vakapinda murenje sezvakaziviswa nezvinyorwa zveQumran zveTestamente yekare zvakawanikwa mumapako padyo negugwa rakafa (Dead Sea) mukati memakore 1946 ne 1947. Pakati pa 1949 na 1956 zvimwe zvinyorwa 930 zvakawanikwa munzvimbo dzeQumran, zvizhinji zvaive zvaipiswa asi zvinoda kukwana 12 zvaive zvichiri zvakanaka. Izvi zvaive zvinyorwa zvakanakisa zvehumbowo hwekukosha kweTestamente Yekare uye kuti ine chokwadi panhorondo yevaJuda.
Izvi zvinotiyeuchidza pamusoro pematengu manomwe emafufu akasara nematengu gumi nemaviri emafufu akasara pakapiwa vanhu zviuru zvishanu nezviuru zvina chekudya naJesu.
MuTembere yemaJuda maive nezvigadziko zvemwenje zvinomwe nezvingwa zvekuratidzira gumi nezviviri zvaimiririra nguva dzemakereke manomwe emuTestamente Itsva uye marudzi gumi nemaviri aIsraeri kubva kuTestamente Yekare. MaJuda nekereke ndivo vanhu vakanyanya kutariswa naMwari panyika.
1947 raivewo gore guru apo mubatanidzwa wenyika dzepasi rese weUnited Nations wakaita sarudzo vakakunda nezvinzvimbo zviviri kuti maJuda apiwe musha wawo wechipikirwa Israeri. Rusia, iri pasi paStalin aive akavenga maJuda, akangotsigira maJuda kwemwedzi inoda kusvika gumi nemisere.
Muna 1948 Israeri yakazviita nyika yakazvimiririra kekutanga kubva zvayaive yaparadzwa nemaRoma muna 135 AD. MaArabu akabva arwisa Israeri.
Muna 1949 vaive vakunda marudzi emaArabu anosvika mashanu aitsigirwa nenyika dzechiArabu nomwe kuti vatonge nyika yavo Israeri.
Muna 1956 vakakunda zvakare Egipita mune imwe hondo murenje reSinai, vakaparadza maArabu muhondo yemazuva matanhatu muna 1967.
Mwari ndipo paakatanga kudzokera kuIsraeri. Zvinyorwa zvepaQumran zvakawanikwa mazuva mamwechete apo Israeri yaiita nyika yakazvimiririra mumashure memakore anosvika 1800 vari muhudzvanyiriri.
Muna 1946 mutumwa akaonekwa naWilliam Branham kuAmerica, zvakatanga hushumiri hwake hunoshamisa muzvipo zvemweya unoshamisa mukuporesa uye kutsanangura zvakavanzika, izvi zvakatungidza rumuko rukuru pakati pevePentecosti mukati memakore 1950 -1960. munana 1960 paive nenguva yekuti Oral Roberts Pentecosti yaiunganidza chikamu chimwechete kubva muzvikamu zvina zvemari yechegumi munzvimbo dzakasununguka.
Mwari akapa kukura kukuru munezvemabasa emweya unoshamisa mumakereke ePentecosti mumazuva aya.
Makereke aive asiri ePentecosti akaitawo budiriro inoshamisa muzvikamu zveEvangeri mukati menguva iyi vari naBilly Graham, mumwe wevavangeri vakuru, vachiita nhanho yekutanga.
Saka Mwari aimutsa zvipo zvemweya unoshamisa nerumutsiridzo rwePentecosti uye dzidziso dzeBhaibheri dzinoshamisa dzaWilliam Branham muAmerica. Panguva imwechete iyi Mwari aisimudza zvakare Israeri kuita nyika nenyeredzi yayo yaDavid inonongedza mativi matanhatu inova mureza wenyika wakurisa kukunda mireza yese panyika.
Asi pamberi kunana 1950, mutungamiri weAmerica Eisenhower mafungiro ake mune zvechinyakare akamurasisa, akakanganisa pakutumira vapi vemazano vechiuto 7 00 kunyika yeSouth Vietnam kuti vanopikisa kuita kwemakomunisiti kuNorth Vietnam pachinzvimbo chekuti vaite sarudzo dzakasununguka muVietnam yese kuti vave nekubatana. Mutungamiri Kennedy, muCatholic akawedzerawo pakukanganisa kwaEisenhower kupfurikidza kutumira vamwe vanopa mazano vechiuto 15 000 kuSouth Vietnam mumakore ana 1960 kuti vanotsigira mudzvanyiriri uye mutungamiriri wenyika aive nehuwori Diem wekuSouth Vietnam aive muCatholic. Asi panosangana chitendero nezvematongerwo enyika zvinoburitsa rufu apo zvinhu zvinoitwa zvichifungidzirwa kuti zvakanaka zvinobva zvashanduka zvoparadza nekuuraya. Zvinhu zvakabva zvawedzera kuipa apo mutungamiri wenyika Johnson akakanganisa akakudza hondo iyi zvaisafungirwa muna 1965 vanhu venhorondo ndipo pavanoti makore 15 akazotevera ndiwo makore apo Amerika yaiedza kuzvisungirira. Mauto eAmerica aive arwa hondo zvakaomarara vasina kubvira vakundwa pane chero hondo imwe, asi vatungamiri vatatu ava vakabereka kuita kwehondo kwaive kusina kugadzikika kwakaipisisa, zvekuti vakaramba vachiwedzera kuipa kwezvinhu muhondo nekuda kwesarudzo zhinji dzakaipa.
Mutungamiri wenyika Nixon nehuchenjeri akabvisa America kubva pakubatirana neVietnam saka negore 1980 America yakatanga kudzokedzana, asi makereke ePentecosti aive asisaratidziki kuva nekubata kemweya unoshamisa sezvazvaive pamakore makumi maviri aive adarika. Ipapo makereke akaramba achiwira pasi pehutungamiri hwevanhu vasina maturo kusvikira mugore ra 2016 paive pava nemasangano akasiyana-siyana anosvika 30 000 emakereke. ChiKristu chinobva muBhaibheri neruzivo rwechokwadi zvaive zvatsiviwa nehunhu husinganzwisisiki “hwechichechichechi”. Kuwana kuchengetedzeka mukereke chava chinhu chatonga pakati pemararamiro asina kugadzikika ane hunyengeri nhasi. Mabasa ekuzvigutsa etsika dzezvechitendero nedzidziso dzevanhu zvatsiva “kutenda muShoko raMwari rakanyorwa”. Jesu ari kusairirwa kunze kwemakereke edu. Akamira kunze kwemukova wekereke achigogodza. Vanhu vari mukereke vari kusimbirira kuda kuonekwa nekugamuchirwa nevakuru vemakereke vakasimudzirwa.
20 Tarira ndimire pamukova, ndichigogodza; kana munhu akanzwa inzwi rangu, akazarura mukova, ndichapinda kwaari, ndicharaira naye, naiye neni.
Mumazuva aJohane Mubapatidzi chitendero chemaJuda chaive chapatsanurana, asi kwete zvakaipa sezvazvava nhasi uno. Kushandiswa kwakaitwa izwi rekuti “moyo” muhuwandu naRuka zvinoratidza zvikwata zvakasiyana izvi zvese zvaive pakati pemadzibaba emaJuda, zvaizova matambudziko aifanira kutarisana naJohane.
RUKA 1:17 Uchafamba (Johane Mubapatidzi) pamberi pake noMweya nesimba raEria, kuti adzorere moyo yemadzibaba kuvana, navasingatereri, kuvuchenjeri bwavakarurama, agadzirire Ishe vanhu vakamugadzirirwa kwazvo.
Zvikwata izvi zvese zvaive nenzira yazvo yazvaitsanangura nayo Murairo waMosesi. Chikwata chimwe nechimwe chaive nechokwadi chekuti ndicho chainatsa, asi vose vaive vakarasika.
Chikwata chimwe nechimwe chechitendero chaive nemafungiro akasimudzirwa kwazvo pamusoro pacho zvekuti Johane Mubapatidzi akakwanisa kugadzirisa dambudziko iri nekuvadaidza vose kuti nyoka kana kuti vana venyoka. Saka akatuka maJuda ese vakauya kuzonzwa achiparidza, varume nevakadzi.
RUKA 3:7 Naizvozvo wakati kuvazhinji vaivuya kuzobapatidzwa naye: Imi vana venyoka ndiyaniko wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunovuya?
Nyoka ine rurimi rwakaita seforoku. Chimwe chikamu ichokwadi chimwe inhema. Makereke nhasi anoparidza pamwe chokwadi (Jesu akafira zvivi zvedu) uye chimwe chikamu nhema. (Semuenzaniso, Jesu akazvarwa musi wa 25 Zvita, uye paive nemuti wakashongedzwa waifambidzana nechidyiro. Kutaura kwese uku hakuna kubva muMagwaro. Vazivi vakapinda mumba vakaona mwana muduku. Havana kushanyira mwana muchidyiro. Saka chii chimwe chiri kutadzikwa nemakereke edu? Asi hakuna munhu anozvipira kupikisa izwi risiri muBhaibheri “Kisimusi” kana “Kirisimasi” sekudaidzwa kwazvakatanga kuitwa nemaCatholic makore akapoteredza 350 AD, nekuti ukadaro unenge wakanganisira bhizimisi guru uye makereke.)
MATEO 2:11 Vakapinda mumba (vazivi vekumabvazuva) vakawana mwana naMaria mai vake; vakawira pasi vakamunamata,
(Hapana kutaurwa nezvaJosefa. Vazivi vekumabvazuva vaive vanhu vaitevera mweya. Mwari, Baba vavo veMweya, aive avatungamirira nguva dzehusiku kwemakore maviri neMweya wake Mutsvene kupfurikidza nyeredzi, iyo isina mumwe munhu aiiona asi vazivi chete. Saka Mwari akaita kuti munhu Josefa aionekwa “sababa” vaJesu panyama ave asipo pakasvika vanhu vaitungamirirwa neMweya kuti vanamate Baba vavo vekudenga muMwana.)
ISAYA 9:6 Nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa Mwanakomana; vumambo vuchava papfudzi rake; zita rake richanzi: Unoshamisa, Gota, Mwari unesimba, baba vokusingaperi, muchinda worugare.
Varume ava vaive vasiri vachenjeri nekuti vaive vakadzidza. Vaive vachenjeri nekuti vaitsvaka kuwana Jesu. Imi makachenjera here?
Kune imwe pfungwa inondityisa- Johane akadaidza vazhinji vemasangano emaJuda “nyoka kana kuti nyoka dzine huturu”. Kana Johane akadzoka nhasi, zvinoita sekuti achasvikotuka masangano edu ese akasiyana achitiudza tese kuti “titsungirire kutendeuka”. Pamusoro pazvose, imwe neimwe yemakereke edu inozviti ndiyo ine chokwadi. Asiwo zviri pachena , kuti nekuwandisa kwekusiyana kwacho, makereke ese haangave nechokwadi. Chinhu chinotyisa ndechekuti makereke edu anokwanisa kuva achitadza ese. Rangarirai hakuna sangano rainatsa mumazuva aJohane.
MARAKI 4:5 Tarirai ndichakutumirai muprofita Eria, zuva iro guru raJEHOVA, rinotyisa risati rasvika.
6 Iye uchadzorera moyo yemadzibaba kuvana, nomoyo yavana kumadzibaba avo, kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutuka.
Eria muprofita akavimbiswa naMaraki (makore 400 asati auya) kuti agadzirire vanhu Kuuya kwaShe kwekutanga. “Moyo” wemadzibaba muhumwechete nekudaro zvinotsanangura kubudirira kwehushumiri hwaJohane Mubapatidzi nekuti maJuda ese aakatendeutsira kunaJesu vakatenda kuti Jesu ega ndiye aive musoro wekereke. MaJuda aive akura ese, pavaitendeutswa, vaibva vabatira Jesu nemoyo mumwechete wakabatana. Vaibva vasiya zvitendero zvakasiyana-siyana zvavaitenda zvechiJuda chiFarise, chisaduse nezvimwe vova maKristu vanotenda nekutevera Testamente Itsva nedzidziso dzese dzeBhaibheri.
Ruka, sen’anga, akanyatsotsanangura kuti Johane Mubapatidzi akazadzisa hafu yechiporofita chaMaraki. Johane Mubapatidzi akaudza madzibaba echiJuda vaifunga kuti vari kutevera murairo kuti vaive vasingateereri kana vakaramba Mesiasi wavo nekusatendeukira kuvana vavo, vanhu vechidiki vaiva Jesu nevadzidzi vake. Vana ava vaive nezvose ruzivo nechokwadi chekuti chii chaive chakarurama mumaziso aMwari.
Vadzidzi ava vaizokura vozova madzibaba echipostora ekereke yekutanga vonyora Testamente Itsva.
Kereke yaizorasika kubva padzidziso dzeTestamente Itsva muNguva yeRoma yozodzoserwa pamasenturi akawanda aizouya, zvichitangira pamumutsiridzi mukuru Martin Luther muna 1517, zvichienda kumuvangeri mukuru John Wesley akaita nheyo dzenguva huru yemamishinari munana 1800. Mumashure maizvozvo nguva yePentecosti yakatanga mumugwagwa weAzusa kuLos Angeles, Califonia ndiko kwakatangira kuita kwechinamato chePentecosti. Masangano akasiyana akabata akasununguka pasi peMweya Mutsvene. Zvakatanga nemusangano musi wa 9 Kubvumbi 1906, zvikaenderera mberi kusvika kunana 1915. Negore 1917 masangano ePentecosti aive apatsanuka kuita masangano akaitwa nevanhu ari pasi pehutungamiri hwevanhu achibva arasikirwa nekubata kwawo kwepakutanga.
Mugore iroro Comunisimu yakatanga kuRussia iri pasi paLenin Mwari achibva atanga kusimudza kuita kwakaipa uku kwaizoranga nyika dzekumadokero nekuda kwekuramba hutungamiri hwaMwari neMweya wake neShoko rake vachiritsiva nehutungamiri hwevanhu nedzidziso dzinoitwa nevanhu. Nenzira imwechete iyi Mwari aive amutsa Babironi kuti irange maJuda muna 606 BC nekuda kwekuti havana kuramba vachitevera Shoko rake rakanyorwa. Munana 1919-1920 Mwari akatumira hosha yechirwere chedzihwa kuSpain iyo Bill Gates anoti chakauraya vanhu 65 miriyoni pamusoro pe 20 miriyoni vakafa muhondo yepasi rese yekutanga kubva muna 1914 kusvika muna 1918. Rudzi rwevanhu rwakarangwa zvakaipisisa nekuramba kwarwakaita hutungamiri hweMweya Mutsvene vachisarudza hutungamiri hwevanhu mumakereke.
MARAKI 4:6 Iye uchadzorera moyo yemadzibaba kuvana, nomoyo yavana kumadzibaba avo, kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutuka.
Zvino humwe hushumiri sehwaEria hwakavimbiswa pamazuva ekupedzisira, nguva yekutambudzika isati yatanga, apo isu ‘sevana vaduku’, vakaberekwa makore 1900 mumashure mevadzidzi kana vapostora, tinotendeukira kudzidziso dzeTestamente Itsva dzakanyorwa nemadzibaba edu mapostora. Kusimbisa hushumiri hwenguva yekupedzisira uhu, kutukwa kucharova nyika kuratidzisa kutukwa kukuru kunozouya munguva yekutambudzika kukuru. Kutukwa chinhu chinobatirira panzvimbo chisingatsakatiki nekukasika. Kut ukwa uku aive mabhomba eatomi akadonhedzwa paHiroshima nepaNagasaki muna 1945 nekubatirira kwawo kwerradioactivhi kwakazokonzeresa kuparara kukuru nguva refu yakazotevera kuputika kwawo kwadarika kare. Iyi yaive yambiro kwatiri kuti tinofanira kutarisira muporofita, akaita saJohane Mubapatidzi, anozotigadzirira Kuuya kweChipiri kwaJesu kupfurikidza kutidzosera padzidziso dzekutanga dzemapostora dzeTestamente Itsva. Kana tikasatendeukira kuTestamente Itsva nedzidziso dzemadzibaba evapostora, ipapo mabhomba akawanda enyukiriya ekuRussia achadonha munguva yekutambudzika kukuru. Uyu ndiwo mubairo wekupedzisira weAmerica nekuramba kwayakaita muprofita wayo wenguva yekupedzisira. Tarisai Russia, mambo wekunyika dzekumusoro.
Vana havagumi kuda kuziva uye vanobvunza mibvunzo mizhinji. Vabereki vavo vanosvika pakusvotwa nekuti zvizhinji zvacho havazivi mhinduro uye vane husimbe hwekutsvaga, saka vanobvisa kuda kuziva kwevana nekuvaudza kuti hazvina kukosha. Pakupedzisira vana vanoshaya basa nazvo.
Christians today no longer are curious about the Bible. Ask them why Jesus wrote with His finger in the dust when asked to stone a woman and they are not interested. They do not know themselves and do not want to find out. They behave just like typical parents. Then they say it is not important. MaKristu nhasi havasisina shungu dzekuziva Bhaibheri. Vabvunzei kuti nei Jesu akanyora nemunwe wake muvhu paakabvunzwa kuti votaka nemabwe here mukadzi aipomba havana kana shungu dzekukudaira. Havazivi ivo pachavo uye havadi kuzvitsvaga. Vanongoita kunge vabereki vaya. Vanobva vati hazvina kukosha.
Saka maKristu anhasi havasisiri vana vanoda kuziva vaya vanotendeukira kumadzibaba mapostora vakanyora Testamente Itsva.
Kana mukabvunzwa mubvunzo usingakwanisi kupindurwa mukereke menyu, makufanira kutanga kuita tsvagiridzo kunze kwekereke yenyu. Kana mukabuda mukereke menyu, munoita mukana wekuwana Jesu, Shoko rechokwadi, nekuti akamira kunze kwemusiwo wekereke.
Ruka sen’anga, akanyora pamusoro pemimba dzaMaria naErisabeta kubva pakutanga padzo.
Maria akazadzwa neMweya Mutsvene akabata pamuviri paJesu apo Erisabeta aive azvitakura mwedzi mitanhatu pamuviri paJohane.
RUKA 1:35 Mutumwa akapindura kakati kwaari: Mweya Mutsvene uchavuya pamusoro pako, nesimba rowokumusoro-soro, richakufukidza, saka icho chitsvene chichaberekwa chichanzi: Mwanakomana waMwari.
RUKA 1:36 Vuye tarira; Erisabeta, hama yako, naiye wava nemimba vo, yomwanakomana pakuchembera kwake mwedzi uno wava wechitanhatu kunaiye wainzi haabereki.
Maria akabva ashanyira Erisabeta akagara naye. Pamwedzi mitanhanhatu, mwana anenge ari mudumbu anenge akapoteredzwa neruchengetedzo rwemvura. Saka Maria akaunza Shoko raMwari (Jesu) kumuprofita waMwari, Johane, paaive ari mumvura dzemimba yaamai vake.
RUKA 1:52 Wakabvisa madzishe pazvigaro zvavo zvovushe, akasimudza vakaninipiswa.
53 Vanenzara wakavagutsa nezvakanaka, Akadzosera vafumi vasina.
Ruka achitsanangura Jesu seMunhu, anotsanangura kuti Mwari achaitei nevanhu.
God exalts the unimportant men and puts down the important men.
Mwari anosimudzira vanhu vasina kukosha achidzikisira vanhu vakakosha.
Saka Mwari anoshanda nerudzi rwevanhu nenzira yakasiyana neyatinotarisira.
Vanhu vakapfuma vane mari vanokwanisa kutenga magarikwa panyika asi vainenzara pamweya saka vane nzvimbo duku kwazvo Kudenga. Mwari anokwanisa kuvadzosera kwavabva pane kuvakoka kudenga.
RUKA 1:56 Maria akagara naye mwedzi inenge semitatu, akadzokera kumusha kwake.
Johane aizozvarwa paizoputsika mvura dzemimba yamai vake. Aizove asiri mumvura. Saka Shoko rakabva kwaari pakabva Maria. Makore makumi matatu akazotevera muprofita Johane aive adzokera mumvura. Apa aive ari mumvura dzeJorodani, achibapatidza vanhu. Ipapo zvakare Jesu akauya kwaari. Shoko raMwari rinouya kumuprofita ari mumvura. Ichi chiratidzo chekuti muprofita wechokwadi anogara mumvura dzeShoko raMwari.
VAEFESO 5:26 Kuti aiite (Kristu) tsvene, achiinatsa nokushambidza kwemvura paShoko.
Hushumiri hwemuprofita ndehwekutidzidzisa Shoko raMwari. Kutenda nekuteerera Shoko raMwari rakanyorwa kunotiita kuti tisukwe kuita kwedu.
Maria paakadzoka kuna Josefa kuti varoorane, aive atova nemimba ine mwedzi mitatu.
Saka zvaive pachena kumunhu wese kuti Josefa aive asiri baba vaJesu, saka Maria aifanira kurarama nekupomerwa kuti aive aita mwana muhupombwe. Vose Jesu naMaria vaizotakura mutoro uyu.
When arguing with Jesus, the Jews said that they were not illegitimate. Pakukakavadzana naJesu, maJuda akati ivo vaive vasiri vana vakaberekwa nevupombwe.
JOHANI 8:41 ….Vakati kwaari: Hatina kuberekwa novupombwe; tinababa vamwe iye Mwari.
Nekutaura uku vaireva kuti aive mwana wehupombwe.
Saka Ruka anobuda pachena kuti kana munhu achitenda, anozvinanika pakupomerwa zvenhema uye mhosva. Iri ndiro rimwe dambudziko rinosangana nekuva muKristu.
Johane Mubapatidzi akabva azvarwa.
RUKA 1:59 Zvino nezuva rorusere vakavuya kuzodzingisa mwana, vakada kumutumidza zita rababa vake, Zakaria.
60 Ipapo mai vakapindura vakati: Kwete uchatumidzwa Johane.
Sen’anga Ruka akanyora pamusoro pekudzingiswa. MaJuda vaida kumudaidza kuti Zacharia (Zita rababa vake) sekuti aizotevera tsoka dzababa vake ozova muprista. Asi zvaive zvisiri muhurongwa hwaMwari. Mwana aizokura kuita jaya risingabvumirane nezvizhinji zvaiitwa nemadzibaba echiJuda enguva yababa vake. Aizotendeutsira madzibaba ezera rababa vake kuvana mazera evana vavo. Saka Mwana uyu aida zita rakasiyana neravaida ivo.
Saka ruka aisimbisa kuti kana munhu achida kubatira Mwari anofanira kuva akagadzirira kusawirirana nezvinofungwa nevabereki vake kana vasingateveri Magwaro. Chokwadi chakakosha kukunda mhuri yedu yepasi pano.
RUKA 14:26 (Jesu akati) Kana munhu achivuya kwandiri, asingavengi baba vake namai, nomukadzi, navana, navanun’una, nehadzvadzi, kunyange novupenyu bwake vo, haangavi mudzidzi wangu.
RUKA 1:80 Mwana akakura akasimba mumweya, akagara mumarenje, kusvikira zuva rokuratidzwa kwake kuvaIsraeri.
Johane Mubapatidzi aifanira kuziva chokwadi saka aifanira kukurira murenje kure nevakuru vechitendero venguva yaaikura. Vaizomutungamiririra mukutadza chete. Saka aifanira kugara ari kure navo.
Johane haana kubvira apinda chero sangano rezvechitendero repamazuva ake. Ndicho chikonzero nei Mwari akavimba naye.
Asi vana vechiJuda, pavaikura, vaizopinda chete chiprista, kana kubata mabasa aMwari, pamakore makumi matatu.
NUMERI 4:1 Zvino JEHOVA akataura naMosesi naAroni, akati:
2 Verenga vanakomana vose vaKohati pakati pavana vaRevi, nemhuri dzavo, nedzimba dzamadzibaba avo,
3 Vanamakore anamakumi matatu navanopfuvura kusvikira pamakore makumi mashanu, vose vanopinda pabasa, kuti vaite basa patente yokusongana.
Vaprista vakatorwa kubva muimba yaRevi. Vaibatira Mwari kwemakore makumi maviri, kubva pamakore makumi matatu kusvikira pamakore makumi mashanu. Saka, zvakadaro, Johane Mubapatidzi naJesu vaifanira kusvitsa makore makumi matatu vasati vatanga hushumiri hwavo. Johane aive ari mukuru pakuberekwa nemwedzi mitanhatu pana Jesu. Jesu paakasvika makore makumi matatu, Johane aive aparidza kwemwedzi mitanhanhatu.
RUKA 3:21 Vanhu vose vakati vabapatidzwa, naiye Jesu abaptidzwa vo,achinyengetera, denga rakazarurwa,
RUKA 3:23 Zvino Iye Jesu akanga anamakore anenge makumi matatu;
Johane Mubapatidzi, paakakwanisa makore makumi matatu, aive okwanisa kuita rubapatidzo rwekutendevuka kuti maJuda azive kuti chiprista chemuTemberi chaive charasika zvakanyanya. MaJuda aifanira kuziva kuti vakuru vavo vezvitendero vaive vasingakwanisi zvachose kuvagadzira kuti vakwanire Kuuya kwaKristu Kwekutanga. MaJuda vaive vemasinagoge avo kana Temberi, uye vaifunga kuti vaive vakachengetedzeka. Uku kwaive kurasiswa kwakakwana. Vakaramba Jesu, maJuda anodarika miriyoni akafa pakaparadzwa Temberi nemauto eRoma ari pasi paTitus muna 70 AD.
Shoko raMwari rakanyorwa rakarambwa nemakereke edu nekuti parizvino Jesu akamira kunze kwemusiwo wekereke. Tinofunga kuti takachengetedzeka tiri mumakereke medu makasiyana-siyana nezvitendero zvawo zvinorwisana nekuti takawana kupona. Kurasiswa uku kuchaparadzwa pachauya nguva yeKutambudzika kukuru ichirova nyika sedutu retsunami.
(Ndicho chikonzero nei umwe Johane Mubapatidzi ari kudiwa munguva yekereke yekupedzisira apo vakuru vemakereke vakasairira Shoko kubva mukereke. Vafundisi vanozviti misoro yemakereke. Hakuna munhu anokwasa kuita misoro miviri, saka hakuna mukana waJesu muhupenyu hwavo. Saka vakuru vemakereke edu havakwanisa kutigadzirira kuti tikwanire Kuuya kwaKristu kweChipiri. Nhasi uno vanhu mumakereke vanovaka kutenda kwavo pazvitendero netsika dzakaitwa nevanhu, uye vanotsamwa kwazvo kana vakanzi vatsigire kutenda kwavo nekubatanidza Magwaro nemamwe Magwaro. Chavanogona chete kutaura zvakataurwa kana zvavanofungidzira kuti zvakataurwa.)
Chinhu chaive chikuru kumaJuda chaive chekuti vanhu vechidiki vakaita saJohane Mubapatidzi, Jesu, nevadzidzi vake vaibatira Mwari zvisinei nekuva kunze kwezvitendero zvemasangano nemasinagoge. Vaive vasingabvi mumasangano ezvitendero zvechiJuda zvemazuva iwayo. Vaive kunze kwemasangano vega ndivo vaive nechokwadi.
[Tine dambudziko rimwechete nhasi uno. Mwari anotsanangura makereke edu semapofu uye anoti akamira kunze kwemusiwo wekereke yeRaodikia (zvinoreva kuti “Kodzero dzevanhu”), inova nguva yekereke yekupedzisira.]
ZVAKAZARURWA 3:14 Nyorera kumutumwa wekereke iri paRaodikia uti:
17 ... usingazivi kuti ndiwe unovurombo nenhamo, uri murombo nebofu usina chokufuka:
20 Tarira, ndimire pamukova, ndichigogodza; kana munhu akanzwa inzwi rangu, akazarura mukova ndichapinda kwaari, ndicharaira naye, naiye neni.
Pane kunyengerwa kweruchengetedzo mukuva vazhinji. Asi vakuru vemakereke havazivi kuti Mwari ari kuitei nhasi uno sezvo vese vachienda nemativi akasiyana, semapofu anofamba murima.
MATEO 15:14 Varegei; mapofu anotungamirira mapofu. Zvino kana bofu richitungamirira bofu, achawira mugomba ose ari maviri.
Chenjerai munyika nhasi uno “gomba” zvinomiririra nguva yekutambudzika kukuru. Chishamiso chikuru kuvaKristu vakaponeswa vanofunga kuti vari kuenda kuMutambo weMuchato vachazviona vachipinda munguva inorwadza kwazvo yerufu munguva yeKutambudzika kukuru.
“Ko ndepapi patakakanganisira tese?” Vachachema, sepamawayiresi nezvivhitivhiti pavakazivisa kukunda kwakaita Trump pasarudza dzemutungamiri weAmerica muna 2016.
Bhaibheri rinodaidza makereke edu kuti mapofu, asi isu tinoti tinoona. Nguva yega ndiyo ichatizivisa kuti ari mugwara chairo ndiyani. Uye, kurwadza kwazvo, tinenge tisirisu.